Mesut Ozil Uu Xalay Ka Sameeyey Rikood Taariikhda U Galay – Heemaal News Network
Mesut Ozil Uu Xalay Ka Sameeyey Rikood Taariikhda U Galay
Mesut Ozil ayaa u muuqda inuu dib u helayo qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa ee muddada ay ka weyday Arsenal, waxaana taas caddayn u ah rikoodh cajiib ah oo uu xalay ka sameeyey garoonka gudihiisa kulankii Arsenal ay 2-0 ku garaacday Manchester United.
Ozil ayaa dhibaatooyin badan la kulmay hal san iyo badh uu Arsenal tababare ka ahaa Unai Emery iyo dhawr kulan oo ka dambeeyey oo Freddie Ljungberg uu ku meel-gaadh ahaa ayuu waa cusub u beryay markii uu Mikel Arteta shaqada qabtay.
Arteta ayaa u sheegay Ozil in uu yahay libaaxa kooxda ee uu doonayo inuu garbihiisa keeno laacibiin u fududayn kara in uu bandhiggiisa ugu sarreeya la yimaaddo, waxaana astaamihii ugu horreeyey ee tababaraha farxad geliyaa ay kasoo muuqdeen laacibka reer Germany kulankii xalay.
Ozil oo qiimaynta labaad ee ugu sarraysa ka helay ciyaartii xalay oo uu ka sarreeyey daafaca Sokratis oo ahaa ciyaartoygii ugu fiicnaa garoonka, ayaa waxa uu ahaa hal-abuuraha khadka dhexe ee kubadda hore u riixayey, waxaana uu dhamaystay 90-kii daqiiqadood ee ciyaarta si ka duwan muddadii macallimiintii hore joogeen.
Arrinaha aan hore looga baranin Mesut Ozil ee uu xalay sameeyey, waxa ka mid in marka ay kooxdiisu kubadda lumiso uu dib usoo noqonayay oo uu isku dayayey inuu culayska ka dejiyo daafaca, hase yeeshee taasi may ahayn xogta khaaska ah ee loo diiwaangeliyey.
Xiddigan khadka dhexe ayaa waxa loo diiwaangeliyey ciyaartoygii ugu orodka badnaa garoonka gudihiisa kulankii xalay, waxaana uu sameeyey wax aad uga fog ciyaaryahannada kale.
Ozil ayaa waxa uu joogay meel kasta oo garoonka ah, waxaana uu orday 11.54km muddadii ay ciyaartu socotay, waana ciyaartoyga kaliya ee orod intaas le’eg ka sameeyey garoonka gudihiisa xalay.
Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyeyaasha ciyaaraha ee xalay tabinayey kulankan ayaa waxay Ozil ugu yeedheen in uu yahay Ozil-kii waqtigii Arsene Wenger oo dib usoo noqday.
Macalinkii Jaamacadaha Muqdisho Ee Dilaaga Ahaa
Dhalinyaro Soomaliyeed Oo Lagu Dilay Maraykanka Iyo Kanada